Sakana Amin’ny Fanomanana Ny Lalao Paralaimpika Any Japana Amin’ny 2020 Ny Fanatrarana Fidirana Tsy Misy Sakana · Global Voices teny Malagasy
Sakana Amin'ny Fanomanana Ny Lalao Paralaimpika Any Japana Amin'ny 2020 Ny Fanatrarana Fidirana Tsy Misy Sakana
Voadika ny 08 Oktobra 2017 5:40 GMT
“Ryuga Akaishi, 15 taona, dia Japoney mpilalao basketball mipetraka amin'ny seza misy kodiarana, mpikambana tanora indrindra ao amin'ny ekipa basketball Saitama Lions ao Tokyo.” Pikantsary avy amin'ny Olympic Channel (YouTube)
Tamin'ny herintaona, naneho hevitra momba ilay fampisehoana mampalahelo nataon'i Japana tao amin'ny Lalao Paralaimpika tao Rio de Janeiro aho. Na nahazo medaly volafotsy 10 sy medaly alimo 14 aza ny ekipa Paralympika Japoney, izay tsy vokatra kely, Rio 2016 no fotoana voalohany tsy nahazoan'ny ekipa Paralaimpika Japoney medaly volamena na iray aza hatramin'ny nanekena tamin'ny fomba ofisialy ny Lalao Paralaimpika ho hetsika ara-panatanajahantena tamin'ny 1960. Noho izany dia mafy ny tsindry ho an'ny Tokyo 2020. Nanamarika ny governoran'i Tokyo, Yuriko Koike, raha niteny tamin'ny taona lasa fa “tena zava-dehibe ny fotodrafitrasa tsy misy sakana, nefa mino aho fa zava-dehibe mitovy amin'izany koa ny toe-tsaina malalaka. “.
Eny ary, mandroso haingana amin'ny 1 Septambra 2017 – telo taona katroka mialoha ny hanombohan'ny lalao Paralaimpika Tokyo – ary ho hitanao fa tena ilaina ireo fotodrafitrasa tsy misy sakana satria ezahan'i Japàna ny manandrana mametraka toerana azon'ny olona manana kilema idirana. Ny ivontoeram-panatanjahan-tena Musashino Forest, ao amin'ny distrikan'i Chofu any andrefan'i Tokyo, mbola mila amboarina ny fahafahana miditra amin'ireo toerana natao ho an'ireo mampiasa seza misy kodiarana mba hilalaovany basketball, badminton ary sabatra ao anatin'ny pentathlon (fanantanjahantena ahitana taranja dimy samihafa) maoderina. Araka ny The Japan News, “tsy nahavita nanaraka ny dika savaranonando nosoratan'ny Kaomity Mpikarakara ny Lalao Olaimpika sy Paralimpika Tokyo tamin'ny Janoary 2016 [ilay] toeram-pilalaovana. Manome fepetra azo tsapain-tànana ho an'ny fahazoana antoka ny fidirana tsy misy sakana ireo torolàlana mifototra amin'ireo fitsipika napetraky ny Komity iraisam-pirenena momba ny Paralaimpika, toy ny haben'ny toerana misy ny seza natokana ho an'ny mpampiasa seza misy kodiarana sy ny haben'ny fanakadrihana (ascenseur).
Araka ny filazan'ny manampahefana iray ao amin'ny governemanta ao Tokyo, nalaina tao amin'ny The Japan News, rehefa vita ireo fotodrafitrasa, dia “noheverina ho toerana tsy misy sakana fehezin'ny didy amam-pitsipiky ny governemanta. Ny mason-tsivana ao anatin'ilay torolàlana dia avo lenta kokoa noho izay noheverinay. “
Mety ho ity no tranga amin'ilay hoe tsy hain'ny tànana havian'ny governemanta izay ataon'ilay tànany havanana, satria tamin'ny tapaky ny volana aogositra 2017 dia nanambara ny Minisitry ny Asa Vaventy fa nitady hanamafy ny lalàna iray tamin'ny taona 2006 ho fampiroboroboana orinasa “tsy misy sakana” izy. Mifototra amin'ny asa ny ankamaroan'ireo lalàna, fa koa mahakasika ny fidirana amin'ny tranom-panjakàna sy ireo tranombarotra misokatra ho an'ny besinimaro. Araka ny voalazan'ny Jiji Press, “niresaka ireo fomba handrisihana ny fitondrana monisipaly mba hanao ho laharam-pahamehana ny fananana drafitra mba hampitombo ny fotodrafitrasa tsy misy sakana eny amin'ireo toerana izay misy ny biraon'ny governemanta sy ireo fotodrafitrasa ara-barotra matetika ampiasain'ireny olona ireny .. Kasain'ilay masoivoho ny haneho ny vokatry ny fifanakalozan-kevitra ho ao anaty volavolan-dalàna iray mba hanavaozana ny lalàna. Halefa ao amin'ny Diet ilay volavolan-dalàna amin'ny herintaona araka izay haingana indrindra, araka ny loharanom-baovao. “
Satria telo taona monja sisa no ananana mandra-pahatongan'ny lalao Paralaimpika any Tokyo amin'ny 2020, dia tsy maintsy hiasa malaky ny governemanta Japoney. Nitatitra ny The Mainichi tamin'ny volana Aprily fa ny 80% amin'ireo toeram-pilalaovana Paralaimpika natolotra dia tsy nahafeno ny fenitra tsy misy sakana napetraky ny governemanta, nilaza fa “latsaky ny tanjona nokendrena ny isan'ireo seza misy kodiarana any amin'ny ankamaroan'ireo kianja Olaimpika izay misy. Ambonin'izany, tsy nahomby tamin'ity sehatra ity ihany koa ireo kianja tokony hampiasaina ho an'ny lalao Paralaimpika”
Tokony hatsaraina ihany koa ireo fotodrafitrasa toy ny fiantsonan'ny fiarandalamby. Ao amin'ny ampahan-dahatsoratra ho an'ny Acccessible Japan, i Kelly Frost, izay mitantana ny bilaogy Adapting Japan, dia nanonona ny zanany Dominick, izay voan'ny “spina bifida” (aretin'ny tsokan-damosina) i Xander rahalahiny.
“Amin'ny ankapobeny dia tena nahafinaritra sy nahaliana ny fijanonako tany Japana , na izany aza tsy toy izany ny iray, ny teny amin'ny fiantsonan'ny fiarandàlamby. Nahazendana ahy ny nahita ny fahasarotanì'ny fitadiavana fanakadrihana tany amin'ny toeram-piantsonana sasany, nefa feno toerana ho an'ny Paralaimpika ny manodidina. Ny toeram-piantsonana sasany aza tsy manana izany akory. Soa ihany fa afaka mamindra ny rahalahiko, noho izany, tsy nanahirana ireo toeram-piantsonana tsy nisy fanakadrihana, fa ho an'ny olona izay tsy afaka mamindra mihitsy, dia tsy ho vitan'izy ireo ny hiditra amin'ireo toeram-piantsonana sasany. Nahagaga fotsiny ny fahasamihafàna fony izaho nandeha fiarandalamby tsy niaraka tamin'ny rahalahiko: tsy voatery mitady fanakadrihana satria matetika dia akaiky kokoa ny tohatra, mora idirana, ary ankoatra izany voamarika amin'ny teny Anglisy. Antenaiko fa rehefa tonga ny Lalao Paralaimpika, dia hisy toeram-piantsonana maromaro ho azon'ny manana kilema idirana. “
Ifampizaràn'ny maro any Japàna ireo ahiahy momba ny Lalao Paralaimpika. Grace Ohashi, izay mpikambana ao amin'ny ekipa olaimpika Amerikàna mpilalao judo talohan'ny nahitana fa voan'ny “sclérose en plaque” (aretin'ny tsokan-damosina sy ny atidoha) izy, ary mipetraka any Japàna, dia naneho ny hafaliany sy ny ahiahiny momba ny lalao Paralaimpika nandritra ny fisehoany vao haingana tamin'ny fahitalavitra tao amin'ny NHK “Barrier Free Variety Show”
“Amin'ny maha-judoka ahy teo aloha sady kilemaina”, hoy Grace, “toy ny nofy ny fahafahana mampiantrano ny Lalao Paralaimpika aty Tokyo … Manahy aho raha tena ho afaka hitazona ny lalao Paralaimpika tokoa i Tokyo. Ho an'ireo mpampiasa seza misy kodiarana, dia mbola sarotra ny hijery ny lalao toy izany, voaràra ny fidiran'ireo mpampiasa seza misy kodiarana na voafetra ny isan'ny seza misy kodiarana … “
Novalian'i Grace ihany koa ny momba ireo olana mahakasika ny vola ilaina ho an'ny lalao Paralaimpika, tamin'ny filazàna hoe, “Marina fa mahafinaritra ny Olympika, saingy mandany vola be koa izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, tsapako fa mitovy lanja amin'izany koa ireo Lalao Paralaimpika! “
Ohatra, milaza i Grace fa, isak'izay misy atleta paralaimpika mahamontsana zavabita tsara indrindra, taona efatra nanantenana, nofinofy ary fiomanana tsara no ambaran'izay – mendrika fankasitrahana ihany koa ny fahombiazan'ireo atleta paralympiana.
Antenainay fa ny lalao Paralaimpika amin'ny taona 2020, miaraka amin'ny fampiasam-bola avy amin'ny governemanta Japoney, dia tena “hitovy lanja” amin'ny Lalao Olaimpika 2020.
17 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana